सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीले भने, अब हामी पनि गाडी चलाउँछौं – Online Nepal
सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीले भने, अब हामी पनि गाडी चलाउँछौं
June 8, 2020 263
काठमाडौं । काठमाडौंमा केही दिन यता पसल ब्यवसाय चल्न थालेका छन् । सडकमा सवारी साधनको संख्या पनि बाक्लो देखिएको छ । लामो समय देखि आजित परेका पसले र ब्यवसायीले पसल ब्यवसाय सञ्चाल गर्न थालेका हुन् । पसल ब्यवसाय सञ्चालन हुन थालेपछि यातायात व्यवसायीहरुले आफुहरुले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
अब सुरक्षित मापदण्ड बनाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । लामो समय सम्म गाडी थन्क्याएर राख्नुपर्दा आफुहरुको अवस्था पनि निकै नाजुक भएको र बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सावधानी अपनाएर यातायात सेवा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
काठमाडौंमा तीन दिन यता सडकमा निजी सवारी साधनको चलह पहल बढेको छ । सडकमा सवारी चापका कारण ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । सार्वजनिक यातायात मजदुरहरुले भोकले मर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग राखेका छन् ।
यातायाता व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायात खोल्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । आफुहरुको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताएका छन् । यातायात मजदुर र ब्यवसायी भोकै हुने बेला भइसकेको उनको भनाई छ । सार्वजनिक यातायातमा १० खर्बको लगानी रहेको र १० लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर आफुहरु यातायात सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनको भनाई छ ।
Prevकाभ्रेमा आफ्नै बाबुको गर्भ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा !
Nextआज महानायक राजेश हमालको जन्मदिन, कति औं वर्षमा पुगे ?
फुल टिप्न खोज्दा यसरी गएको रहेछ पाइलटको ज्यान ! फेरी किन फर्कीएका थिए फुलको बोटमा
घर धनी र घर भाडामा लिने व्यक्त्तिले ध्यान दिनु पर्ने अधारभुत कुराहरु
गोंगबु घ टनामा अरु पनि संलग्न भएपछि सर्बोच्चका वकीलले गरे ड’र लाग्दो खुलाशा,कल्पलाई जन्म क़ै’द जे ल ! भिडियो हेर्नुहोस